Fihenana. Ilaina ny fahaiza-mitantana eo amin’ny sehatry ny angovo mba hampihena ny fatiantoka eo amin’ny famokarana sy ny varotra eto Madagasikara. Raha vita izany, hoy izy dia ahazo 67 Tapitrisa dolara isan-taona ny Fanjakana. 50% mantsy amin’izao ny fatiantoka eo amin’ny famokarana, ary 30% eo amin’ny varotra hihena. Afaka hahena 20% anefa izany.[amazon_link asins=’B079LV68KC,B01MR4L962,B07B49WNY7′ template=’ProductCarousel’ store=’booknewsmada7-21′ marketplace=’FR’ link_id=’3504d132-610c-11e8-83d0-6f38f67a0ac0′]
Maro no vahaolana azo ampiharina, hoy i Andry Ramaroson, Mpitantana ny orinasa Schneider Electronic. Tokony atao « hybride centrale thermique », izany hoe sady mandeha amin’ny masoandro no mandeha amin’ny solika mba hihena ny vidin-jiro, ny fitaovana mpamokatra herinaratra. Tokony ampiasaina ny herin’ny masoandro.
Famelabelaran-kevitra nataon’i Andry Ramaroson, Mpitantana ny Schneider Electronic, ny zoma lasa teo, tao Anosy.
Nilaza ihany koa Atoa Andry Ramaroson fa tokony atao » monitoring » ny faritra rehetra ka azo amin’ny fotoana mivantana izay zava-misy rehetra. Afaka manapa-kevitra eo no ho eo ny mpitondra.
Misedra olana ny sehatra angovo eto Madagasikara. Mahatratra 50% ny fantiantoka ara-pamokarana ary mihoatra ny 30% ny fantiantoka ara-barotra eo amin’ny angovo. Mbola latsaky ny 20% n’ny mponina no mampiasa herinaratra, izany hoe manodidina ny 500 000 no isan’ny mpanjifa. Azo atao anefa ny mampiakatra izany ho 80% ao anatin’ny 5 taona. Mbola mahatratra 76%-n’ny famokarana ihany koa no mampiasa solika.